चर्चित कलाकार तथा निर्देशक दीपाश्रीको फेसबुक ह्या क गर्ने १४ वर्षे बालक समातिए, को हुने उनी ? दीपाको फेसबुकको सूचना त चुहाएनन् ? - Entertainment Khabar
चर्चित कलाकार तथा निर्देशक दीपाश्रीको फेसबुक ह्या क गर्ने १४ वर्षे बालक समातिए, को हुने उनी ? दीपाको फेसबुकको सूचना त चुहाएनन् ?
प्रकाशित मिति: बुधबार, चैत्र २५, २०७७ समय: ७:०६:३३
कलाकार तथा निर्मा निर्देशक दीपाश्री निरौलाको फेसबुक ह्याक गर्ने युवकलाई प्रहरीले प क्रा उ गरेको छ । दीपाश्रीको फेसबुक ह्या क गरेको आरोपमा प्रहरीले पर्सा बहुदजरमाई नगरपालिका – ५ बस्ने १४ वर्षीय बालकलाई पक्राउ गरेको हो । सोमबार बालकलाई जिल्ला अदालत काठमाडौँको पक्राउ अनुमति पर्साबाट प क्रा उ गरेको हो।
पक्राउ गरेको खबर प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) नविन्द अर्यालले जानकारी दिए । २ साता अघिमात्रै अभिनेत्री तथा निर्देशक दीपाश्री निरौलाको सामाजिक सन्जाल फेसबुक ह्या क भएको विषयमा निर्माता निदेशक तथा कलाकार दीपकराज गिरीले यस विषयमा जानकारी दिएका थिए । दीपाका नजिकका मित्र दीपक राज गिरीले ह्या क रलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको विषयमा पनि दीपकले नै जानकारी दिएका छन् ।
ती ह्या क रले फेसबुक ह्याक गर्दै साथीहरूसँग पैसा माग गरेको थिए । दीपाले फेसबुक ह्या क गर्ने विरुद्ध महानगरीय पेरिसअर निवेदन दर्ता गरेकी थिइन । निवेदन दर्ता गरेको केही समय नबित्दै फेसबुक ह्या क गर्ने प क्राउ परेका हुन् ।